राजनीतिक चेतको पराकाष्ठाले जन्माएको पीडा र राजनीतिक लघुताभास | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
राजनीतिक चेतको पराकाष्ठाले जन्माएको पीडा र राजनीतिक लघुताभास
२०७७ कार्तिक २४, सोमबार ०८:३३ गते
बलिउडका प्रख्यात फिल्म लेखक सलिम खानको एउटा प्रसिद्ध कथन छ– ‘आँसु आए तो खुद पोंछ लेना, लोग पोंछने आएगे तो सौदा करेंगे ।’ सलिम–जावेद जोडीले सन् सत्तरी र असीको दशकमा बलिउडमा एकछत्र राज गरेका थिए । बलिउड मसाला फिल्मका लागि उनीहरुको लेखनमा कमालको जादु थियो । यी दुईको जादुई कलमबाट निस्किएको बलिउड फिल्मका पटकथाहरु बेजोड हुन्थे, जसले तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबाट लगाइएको आपतकालमा भारतीय नागरिकहरु विशेषतः युवाहरुको हतासपन, निराशा, कुण्ठाका साथसाथै सिस्टमप्रतिको क्रोध र आक्रोशलाई सिल्भर पर्दामा चामत्कारिक ढङ्गले उतार्दथ्यो । यतिसम्म कि त्यसबखतका हिन्दी सिनेमाका पोस्टरहरुमा नायकनायिकाको बदलामा यी दुईको तस्वीरलाई नै भव्यताका साथ प्रोजेक्ट गरिन्थ्यो, दर्शकलाई सिनेमा हलसम्म डो¥याउनका लागि । यो जोडीले शोले, जन्जीर, दिवार, त्रिशूल, कालापत्थर, डनजस्ता यादगार फिल्महरु दिएका छन् बलिउडलाई । भनिन्छ कि यो जोडीकै लेखकीय जादुले हिन्दी फिल्म जगत्मा अहिलेका सर्वकालीन महान् कलाकार अमिताभ बच्चनजस्तो प्रतिभाको आगमन हुन पुग्यो । यद्यपि, यो जोडी नभएको भए पनि ढिलो–चाँडो अमिताभ बच्चनजस्तो प्रतिभाले आफ्नो बाटो पहिल्याउँथ्यो नै होला, नदीले समुद्रसम्मको बाटो पहिल्याएजस्तै । तर, सहायक नदीहरुजस्तो अरुमा मिसिएर गन्तव्यमा पुग्नु र आफू स्वयं नै गन्तव्यमा पुग्नुमा फरक त अवश्य पर्दथ्यो होला । हो, यतिमात्र फरक पारेको हुनुपर्छ यो जोडीले अमिताभ बच्चनको भाग्यलाई । खैर, यो प्रसंगलाई यहीँ टुंग्याऊँ । त्यसै जोडीमध्येका एक सलिम खानको यो कथनले नेपाली राजनीतिमा भने गहिरो तथा बहुआयामिक अर्थ राख्दछ ।
‘मेरो सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेल्न थाल्यो’, नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति हो यो । यो अभिव्यक्ति र झन्डै सात दशकअगाडिदेखिका प्रधानमन्त्रीहरुको आफूलाई राजनीतिक सङ्कट पर्दा आउने अभिव्यक्तिहरुमा अचम्मलाग्दो तारतम्यता देखिन्छ । बेग्लाबेग्लैरुपले नेपाल र भारत यो कालखण्डमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, तर नेपालको राजनीति र यसमा भारतको भूमिका पछिल्ला सात दशकमा जहाँको त्यहीँ टक्क अडिएको छ । नेपालको राजनीतिमा अझ त्योभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सवालमा अत्यासलाग्दो गरी विगत सात दशकदेखि निरन्तररुपमा तत्कालीन समयका बहालवाला प्रधानमन्त्रीबाट माथिल्लो अभिव्यक्ति आउनु वा आइरहनु के संयोगमात्रै हो त ? अहँ, यो संयोग बिल्कुल होइन ।
एउटा सामान्य राजनीतिक चेत भएको मानिसले पनि नेपालको विगत सात दशकको राजनीतिक विकासक्रम, यही कालखण्डका राजनीतिक पात्रहरु र तिनीहरुको चरित्र र यसमा भारतको समष्टिगत स्वार्थलाई कनेक्ट गरेर विश्लेषण ग¥यो भने पनि बुझ्न सक्दछ कि नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका के हो भनेर । प्रधानमन्त्री पद सामान्य राजनीतिक चेत नभएर राजनीतिक चेतको पराकाष्ठा हो । अतः नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरु (चाहे विगतका हुन् या वर्तमानका) ले आफूलाई राजनीतिक सङ्कट पर्दा अभिव्यक्त गर्ने उपरोक्त अभिव्यक्ति मूलतः त्यही राजनीतिक चेतको पराकाष्ठाले जन्माएको पीडा हो । प्रत्येकपटक जतिबेला यो ‘महावाणी’ अभिव्यक्त भएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ तरंगित गर्ने गरेको छ । एकथरीलाई राजनीतिक स्टन्टको रुपमा र अर्कोथरीका लागि यो अभिव्यक्ति एउटा गज्जबको स्वादिलो मसला हो चिया गफमा निम्ति । पक्ष र विपक्षमा बात मार्न पाए पुग्छ थरी–थरीका मान्छेका लागि । एकथरीका लागि यो अभिव्यक्तिको न त गम्भीरता थाहा छ, न त राजनीतिक चेतको पराकाष्ठाबाट जन्मिएको पीडाको गहिराइ । यस्ता मान्छेहरु राजनीतिको छिपछिपे पानीमा पौडिरहेका हुन्छन्, जहाँ सबथोक सतही छन् । यस्ता थरी मान्छे हरपल त्यही छिपछिपे पानीमा मूल नदीले किनारा लगाएका सानातिना जिउँदा–मरेका माछा समात्ने दाउमा हुन्छन् । जिउँदो ठूलो माछा समात्न नदीको गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ डुबिने जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यस्ता थरी मान्छे त्यत्रो जोखिम या त लिन चाहँदैनन् या भनौँ सक्दैनन् । आश्चर्यजनक कुरा अर्को के छ भने यो थरीमा समाजको साधारण, अलिअलि पढेलेखेको जस्तो गर्ने युवापुस्ता, राजनीतिक चेत नभएको वा कम भएको नागरिक पर्दैनन् । यो वर्गमा त तथाकथित् पढेलेखेका, राम्रै राजनीतिक चेत भएका, गाउँसमाजका टाठाबाठा, विभिन्न पेसाधारी, जहाँ पनि सिस्टमलाई मिचेर आफ्नो काम बनाउन प्रयत्नरत र काम बनिसकेपछि अरुलाई फुइँ झार्नुपर्ने आदि इत्यादि चरित्र भएका महामानवहरु पर्दछन् ।
समाजको साधारण, अलिअलि पढेलेखेको जस्तो गर्ने युवापुस्ता, राजनीतिक चेत नभएको वा कम भएको नागरिक वर्गमा पर्ने अर्कोथरी पनि छ, जसलाई त आफ्नो जीवनकै नित्यकर्मदेखि फुर्सद छैन । यो थरी त रातदिन परिश्रम गर्छ, आफ्नो र आफ्नो परिवारको वर्तमान र भविष्य सुधार्न । यो थरी देशको राजनीतिमा के भइरहेको छ, कसले के भन्यो, भारत किन रिसायो, भारत को हो, चीन को हो, कतातिर फर्केको छ, किन त्यता फर्कियो, उता किन फर्किएन ? केही थान मानिसहरु २० अर्बको चियानास्ता कसरी खान सक्छन् फगत तीन वर्षमा ? समातिएको सुन कसरी पित्तल हुन्छ स्टेसनमा पुग्न नपाउँदै ? लकडाउन लाग्छ, खुल्छ, फेरि किन लाग्छ, लागे पनि त्यसबीचको समयमा तयारीहरु किन गरिँदैन ? किन देशकैै सबैभन्दा नाम चलेका अधिवक्ता टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहँदा अदालतमा भ्रष्टाचार छ, न्यायाधीशहरु घूस खान्छन् भनेर हाकाहाकी भनिरहन्छन्, तर पनि सरकार र अदालत मौन बस्छ ? यति हुँदाहुँदै पनि जनले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको अहंकार, दम्भ, उत्तेजना, आवेग जस्ताको तस्तै किन छ ? यो वर्ग केही कुराको मतलब राख्दैन । यो थरि टोटल ‘लस्ट’ छ । हुबहु हाम्रो नेपाली नायिका पूजा शर्माजस्तै, केवल आफ्नो कामसँगमात्रै मतलब राख्ने । यो थरीलाई आफु र आफ्नो भविष्यसँग मतलब छ । यो थरीकाहरु सोच्दछन् हामीलाई के चासो राजनीतिसँग ? हामीले आफ्नो गरेर खाने हो । हुन त, सबै कुराको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सबैैैले सबै कुराको चासो लिएर चल्दा पनि चल्दैन । तर पनि यति सबै देखिरहँदा, भोगिरहँदा, सहिरहँदा रगत त उम्लिनुपर्ने हो, कम से कम मतपेटिकामा भोट खसाल्ने बेलामा मात्र पनि उम्लिदिएको भए ? खैर, सबैतिरबाट बेमतलब भएर बाँच्न सक्नु पनि परम आनन्द हो । अझ त्योभन्दा पनि पर यी कुनै पनि कुराहरुको मतलब नराख्दा उत्पन्न हुने अज्ञानताबाट देखिनुपर्ने असहजपनाको साटो उल्टै अनुहारमा झझल्किने गर्वानुभूति डरलाग्दो परम आनन्द हो । तर, (यो शब्दलाई प्रख्यात पत्रकार तथा लेखक विजयकुमार पाण्डेको लामो स्ट्रेस दिएर बोल्ने शैलीमा) भविष्यमा कुनै दिन यो थरीकाहरुले पनि मूल्य त चुकाउनुपर्ला, यति अमूल्य र डरलाग्दो परम आनन्द उपभोग गरेकोमा । किनकि, यो वैश्य युग हो । वैश्य युगमा हरथोकको मूल्य हुन्छ । प्राप्ति र उपभोगका लागि मूल्य चुकाउनैपर्छ । वर्तमानमा पनि मूल्य त चुकाइरहेको होला यो थरीले, हु नोज ! कहिले निजी अस्पतालमा बिरामी र पैसा दुवै सिध्याएर त कहिले निजी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा हुँदाहुँदै पनि अनेक शीर्षकमा शुल्क बुझाएर । आफ्नै सम्पत्ति खरिद–बिक्री गर्दा पनि मालपोतमा अनुचित रकम दिएर । बालीमा हाल्ने मल पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि नपाएर । सामान्य ज्वरो आउदा स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल नपाएर । पचासौँ वर्षको लामो इतिहास, अर्बौंको लगानी र हजारौँको रोजगारी सिर्जना गरेर पनि एउटा गतिलो उद्योगको हैसियत नपाएर, मूल्य त चुकाइरहेकै छ यो थरीले वर्तमानमा पनि । भविष्यको भविष्यले नै बताउला, तर चुकाउनु त पर्छ नै । ज्ञानले पीडा दिन्छ, राजनीतिक ज्ञानको पराकाष्ठाले प्रधानमन्त्रीहरुलाई दिने पीडा आफ्नो ठाउँमा । तर, अज्ञानताबाट प्राप्त हुने परम आन्नद पनि ‘फ्री’मा त कहाँ पाइयो र !
खैर, माथिकै प्रसंगलाई जोडौँ । एकथरीका लागि प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त अभिव्यक्ति फगत एक राजनीतिक स्टन्ट हो । यो अभिव्यक्तिले यो थरीलाई बिजिनेस प्रदान गर्दछ, ठयाक्कै सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजिनेस प्रदान गरेजस्तै । अनि त के चाहियो कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी देखिने, कोभन्दा को बढी भारतविरोधी देखिने ओलम्पिक नै सुरू हुन्छ । चिया पसलहरुमा, चोक–चोकहरुमा, तथाकथित् बौद्धिक तथा प्राज्ञिक जमघटहरुमा, जागिर खाइँरहदा पनि फुर्सदिलो होइन मिल्ने अन्य अनेकन स्थानहरुमा । अब मूल विषयतिर लागौँ ।
विसं २००७ सालको उत्तरार्धमा जंगबहादुर राणाले १०४ वर्ष पहिले सुरू गरेको एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासनको पटापेक्ष हुँदै थियो । राजा त्रिभुवन विसं २००७ कार्तिक २३ गते काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशमशेर राणाले राजा त्रिभुवनका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेसको संगठित विद्रोह, राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली प्रस्थान, नेपालमा राणाविरोधी जनभावना, राणाहरुको खस्किँदो आत्मविश्वास इत्यादि परिघटनाहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेका तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपी सिन्हाले तत्कालै परिस्थितिको गाम्भीयर्तालाई बुझिहाले र सोको रिपोर्टिङ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गरे । उता, दिल्लीमा आसीन तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको राजनीतिमा विकसित भइरहेको घटनाक्रमको पलपलको जानकारी लिइरहेका हुन्थे, उनै नेपालस्थित भारतीय राजदूत सिपी सिन्हामार्फत । सन् १९४० र ५० को दशकमा विश्वमा नै एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक लहर चलेको थियो । त्यसै मेसोमा भारत पनि २०० वर्ष लामो ब्रिटिस उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको थियो । स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए जवाहरलाल नेहरू । अतः नेहरू आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना भएको हेर्न चाहन्थे । स्वाभाविकरुपमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने सदाशयता थियो नेहरूमा, त्यसैले त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुलाई हरसम्भव सहयोग पनि गर्दथे । तर, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कानुन विषय अध्ययन गरेका, महात्मा गान्धीका अनुयायी, भारतजस्तो विशालकाय राष्ट्रलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र बनाउन अग्रणी भूमिका खेलेका बल्लभभाइ पटेल र सुभाषचन्द्र बोसजस्ता दिग्गज नेताहरुलाई उछिनेर स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल जवाहरलाल नेहरू राजनीतिका एक चतुर खेलाडी थिए । नेहरू नेपालमा प्रजातन्त्र त चाहन्थे र यसका साथसाथै नेहरू नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनामा भारतको सर्वोपरि भूमिका रहेको सुनिश्चित पनि गर्न चाहन्थे । यसो गर्न सकेमा यसको प्रत्यक्ष दुई ओटा फाइदा देखेका थिए नेहरूले ः १. नेपालको राजनीतिलाई सधैँ आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा भारतको राष्ट्रिय तथा व्यावसायिक हित प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ र २. खुला सिमानाका कारण सुरक्षाको संवेदनशीलता रहेको हुँदा कतिपय अवस्थामा नेपाल सरकारलाई ीसधै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसका लागि सुरूदेखि नै डोमिनेट गरेर राख्दा राम्रो । राजा त्रिभुवनको भारतमा शरण माग्नु, नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरु भारतमा नै बसेर राणा सरकारविरूद्ध संगठित विद्रोह गर्नु, राणाहरु राज्य सञ्चालनमा कमजोर हुुँदै जानु, नेपालमा राणाविरोधी भावना मौलाउँदै जानु आदि इत्यादि कारणहरु पर्याप्त थियो नेहरूका लागि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिकालाई केन्द्रविन्दुमा स्थापित गर्न । लगभग ५ महिनाको अथक प्रयासपछि जवाहरलाल नेहरू यसमा लगभग सफल पनि भए । २००७ साल कार्तिक २३ गते दिल्ली प्रस्थान गरेका राजा त्रिभुवन त्यस उपरान्त फाल्गुन ५ गतेसम्म सपरिवार दिल्लीमा बसिरहँदा र फाल्गुन ६ गते स्वदेश फर्कंदासम्म बीचमा अनेकौँ घटनाक्रमहरु विकसित भए । अन्ततः दिल्ली सम्झौताको नामले प्रसिद्ध कथित् नेहरू–प्रजातन्त्र लिएर राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए । इतिहास पल्टाएर पढे हुन्छ, इतिहासमा कहीँकतै पनि नेपाली राजनीतिक पार्टीको गोरू बेचेको साइनो पनि लेखिएको छैन दिल्ली सम्झौतामा । यो इतिहास नेपालमा मूलधारको राजनीति गर्ने कुनै पनि पार्टीको क–ख–ग नेतालाई थाहा छ । त्यसमा पनि मुलुकको सर्वोच्च पद प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन ? इतिहासमा यो पनि कालो अक्षरमा लेखिएको छ– भारतीय राजदूत सिपी सिन्हाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत । तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर, तत्कालीन राजा त्रिभुवन, तत्कालीन गृहमन्त्री विपी कोइराला कति निरीह थिए, फगत एउटा सचिवस्तरको कर्मचारी भारतीय राजदूतसँग ! मातृकाप्रसाद कोइराला कसरी प्रधानमन्त्री बने ? विसं २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको नेपालको राजनीति बुझ्नका लागि त्यही कालखण्डमा जन्मिनुपर्छ र ? २०४७ को प्रजातन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलन र त्यसमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री स्व. चन्द्र शेखरको भूमिका, २०५२ सालमा सुरू भएको जनयुद्ध र त्यसमा भारतको भूमिका, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र पुनः दिल्ली सम्झौता । बूढापाका भन्थे– इतिहास दोहोरिन्छ । यहाँ त नभन्दै जस्ताको तस्तै दोहोरियो । दुरूस्तै दोहोरियो । इतिहास दोहोरिन सक्छ भन्ने बोध भएर हो वा राजनीतिक चेत नभएर हो, साधारण जनलाई त खासै पीडा भएन तर कठै बरा ! हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु । २००७ सालदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक चेतको पराकाष्ठाले जन्माएको पीडा र भारतसँगको राजनीतिक लघुताभासबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी क्रमशः भासिँदै गए । ‘आँसु आए तो खुद पोंछ लेना, लोग पोंछने आएगे तो सौदा करेंगे’– सलिम खान । राजनीतिक चेतसँगसँगै सलिम खानको शायरीको मर्म बुझ्ने चेत पनि पलाएको भए कम से कम हालको भारतीय राजदूतले नेपालका मन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा उपरखुट्टी लगाएर बस्ने दुस्साहस त गर्ने थिएनन् । शारीरिक हाउभाउको पनि त छुट्टै विज्ञान छ । कोभिड–१९ को खोप आविष्कार गर्न सक्नुमात्रै विज्ञान हो र !